🥇 ▷ Khariidadaha Google ayaa hadda la cusbooneysiiyay… Laakiin keliya iPhone-ka? ✅
Khariidadaha Google ayaa hadda la cusbooneysiiyay… Laakiin keliya iPhone-ka?
Khariidadaha Google ayaa hadda la cusbooneysiiyay… Laakiin keliya iPhone-ka? – Google ayaa khaa’in aad u xun oo xun khariidadahaaga! Jid ahaan, waxay xitaa u keentay Google Street View App-ka, kaas oo shaki la’aan ah inuu si arxan darro ah ugu daro isticmaaleyaasha. Waxa xiiso liita leh, waxa keliya oo laga heli karaa Nidaamka Hawlgalka ee Android.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in Google uusan iloobin taleefannada casriga ah ee Apple uu siiyo… Ka dib oo dhan, nooca Khariidadaha Google ee macruufka uma muuqdaan inuu diyaar u yahay Android-ka Google ee soo socda!
Khariidadaha Google IOS waxay leedahay muuqaal aad u xiiso badan, oo aan ka jirin nooca Android.
Markaa isticmaale Reddit wuxuu gartay inay wax cusub ku arkeen shaashadooda Khariidadaha Google. Macluumaad yar oo ku saabsan cimilada laxiriirta aagga cilmi baarista.
Muuqaalka ayaa leh meel yar oo koonaha bidix ee kore ee khariidada, laakiin ma aha badhan. Taasi waa, ma awoodi doontid inaad hesho macluumaad cimilo oo faahfaahsan meel gaar ah. Intaa waxaa u dheer, sidoo kale ma cadda halka ay macluumaadku ka yimaadeen.
Si kastaba ha noqotee, shaki la’aan waa dheeri aad u xiiso badan oo ku saabsan app-ka! Jid ahaan, waa ii muhiim aniga… In aan soo afjaro waqtiyada aan kaga tago guriga oo gaagaaban iyo dharbaaxada, si aan u gaaro halka aan u socdo oo aan roob u noqon doono.
Taasi waxay dhahday, in kasta oo waxqabadka macruufka wali uu yahay mid gaar ah, waa inay gaaraan dhamaan aaladaha Android maalmaha soo socda. Marka uma baahnid inaad walwasho. Sidoo kale, Muuqaalka Wadada, oo hadda si buuxda u ah Android, waa inuu sidoo kale ku dhowaa inuu gaaro dhammaan iPhones.
Khariidadaha Google ayaa hadda la cusbooneysiiyay… Laakiin keliya iPhone-ka? “Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan?” Nala wadaag fikradahaaga fikradaha hoose?
Khariidadaha Google ayaa la cusbooneysiiyay si ay kaaga caawiyaan magaalooyinka waaweyn
Weligaa ma u safray magaalo weyn oo Yurub ah oo aad gebi ahaanba dareentay lumitaan ama hubin waxa la sameeyo? Ha walwelin, waa wax gabi ahaanba caadi ah … Ka dib oo dhan, in nolol maalmeedka magaalada casriga ah way adag tahay xitaa kuwa halkaas sanado badan ku noolaa.